सभापतिमा विमलेन्द्र निधिको दावी स्वभाविक !::जय नेपाल न्यूज
सभापतिमा विमलेन्द्र निधिको दावी स्वभाविक !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामि महाधिवेशनमा सभापति पदको आकांक्षी बन्ने निर्णय गरेसंगै नेपाली कांग्रेस वृत्त अहिले तात्तिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि कांग्रेसको उपसभापति र मुलुककै उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका निधिको दावीबारे अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । अधिकाशंले निधिको दावीलाई स्वभाविक मान्दा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट कायकर्ताहरु भने निधिको दावीको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र शक्ति समीकरण महाधिवेशनको मितिसम्म कुन अवस्थामा पुग्छ यकीन गर्ने अवस्था छैन । आफ्नो राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय शेरबहादुर देउवाको मुख्य सहयोगीका रुपमा उभिएका निधिको दावी अस्वभाविक भने छैन । पिता महेन्द्र नारायण निधिसंग जोडिएको विरासत मात्रै होइन विद्यार्थी कालदेखि नै कुशल र गतिशील नेताका रुपमा निधिले आफ्नो छवि निर्माण गरेका छन् । पञ्चायतको विरोध गरेकै कारण काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट रेस्टिकेट गरिएका निधि जनकपुर पुगेर आर.आर.क्याम्पसमा भर्ना भए तर प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिन छाडेनन् । निरन्तरको धरपकड र संघर्षका बीच नेविसंघको निर्विकल्प नेता बनेका युवा निधिलाई वीपी कोइरालाकै प्रस्तावमा नेविसंघको अध्यक्ष बनाइएको थियो । पञ्चायतका कठिन दिनहरुमा विमलेन्द्रन देश छाडेर भागे न त कांग्रेस भन्दा राजा ठीक भन्ने निष्कर्षमा पुगे । नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर क्रियाशील निधिले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको भूमिका यसअघि नै निर्वाह गरिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको भोट ब्यांकको रुपमा रहेको मधेशमा कांग्रेसको पकड फर्काउन नेतृत्वमा निधिको उपस्थिति निर्णायक हुनसक्छ । मधेशमा गुमेका साख मात्रै फर्काउन सक्दा कांग्रेसले आम निर्वाचनसमेत जित्न सक्ने आँकलन गरिन्छ । संविधान निर्माणका लागि निर्णायक पहल कदमी लिएका निधि कांग्रेसभित्र मधेश र पहाडमा उत्तिकै रुचाइने नेतामा पर्दछन् । निधिप्रति सद्भाव राख्ने कतिपय कांग्रेसीहरु देउवासंगको उनको संगत रुचाउदैनन् । तरपनि देउवाको इमान्दार सहयोगीका रुपमा निधिले देउवालाई ४ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापति बनाइसकेका छन् ।
जिन्दगीभर देउवालाई सघाएवापत यसपटक देउवाले आफूलाई सघाउनुपर्ने निधिको तर्क स्वभाविक छ । तर सत्ता र शक्तिको एकल उपयोगमा रमाउने सभापति देउवा आफ्ना राजनीतिक सहयात्रीलाई आफ्नो आसन छाड्न तयार नहुने देखिन्छ । निधिले देउवालाई आफ्नो दावीबारे जानकारी गराएर निस्कनासाथ सभापति देउवाले निधिबाहेकका निकटवर्तीहरुसंग छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा देउवाले निधिको महत्वाकांक्षा बढेको भन्दै आफू जसरी पनि सभापति बन्नुपर्ने भएकोले निधिको समर्थन जरुरी हुने बताएका छन् । जानकारहरु सभापति देउवाको पार्टीभित्रको जनमतको ४० प्रतिशत हिस्सा निधिको पकडमा रहेको बताउँछन् । देउवाले निधिको महत्कांक्षा रोक्न यहीबीचमा गोपालमान श्रेष्ठलाई पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्न लगाएसकेका छन् । आफ्नो टिमबाट देउवालाई रिझाउन सके निधि आफैं सभापतिको बलियो दावेदार हुनेछन् । देउवा तयार नभएमा पनि देउवाको विकल्प हरहालतमा खोज्न चाहनेहरुको विकल्प निधि बन्न सक्छन् ।